ဝါဆို ဝါခေါင် ရေတွေကြီးလို့
တို့လည်း ကြောက်ပေါင် အတူသွားစို့
July, August... rain and flood
Let's go pick the ripe rose-apple,
Hi! Take care! In thorns and mud
That's where big-black leeches grapple,
Leeches? Bah! The thornless things,
I'll fight snakes of serpent-kings,
Who's afraid? Let's all go now,
I'll just leave my coconut cow,
[Translated by Prof: G.H.Luce]
ဘုရားအလောင်းစိတြဂီဝါ၊ ဟေမဝါသေလာ ငှက်အပေါင်း ထောင်သောင်း ခညောင်းကြပေတာ။
ဂနိုင်ဆီးတဲ့ မြိုင်တောကြီးထဲမှာ၊ (အလောင်းတော် ခိုမင်း သင်းဖွဲ့ကာ)၂၊ (ထင်ရှားစွာ)၂၊ လမ်းမမှားဘို့ နေ့စဉ် ဟောကြားကာ၊ (ငှက်ပေါင်းတောင်းဆုခြွေကကာ၊ သနားကရုဏာ၊ တရားရှုကာ၊ သနားကရုဏာ)၂၊ စိတြဂီဝါခိုမင်း ထင်လင်းပါ။
(ရှေးသရောအခါ ပြည်ဗာရာတွင်း ဆင်းသက်လာ၊ သင်းဖွဲ့ကာ၊ အစာရှာရန် မြန်းခဲ့တာ)၂၊ (သတ္တဝါငှက်ပေါင်း ထောင် သောင်းပါ)၂၊ အလောင်းတော်မှာ ပိုက်ကွန်တွင်းက ကင်းလွတ်စေရန် နေ့စဉ်ကြံဆကာ။
ရန်ဘယာ မသန်းကာ စိတ်အေးချမ်းစွာ၊ လောင်းမြတ်ဉာဏ်မျှော်တာ။ အော် ဆုံးမတော်မူရှာ၊ ပိုက်ကွန်တွင်းက လွတ် ​ကင်းရာ ရန်သူတွေဝေးကွာအောင်သာ၊ ညီညီညာညာလွတ်မြောက်ခဲ့ဘူးတာ၊ အလောင်းတော်မြတ်ခိုမင်းမှာ။
တရံရောအခါ ဟေမာအိုင်အကူး (မြူးကာ မြူးကာ)၂၊ သီးပွင့်စုံစွာ စားသောက်ဖွယ်ရာ၊ သုံးဆောင်ကာအပြီး ခရီးကလာ၊ (စိတြ)၂ ဂီဝါ၊ သီးနှံငုံကင်း ဆောင်ကြဉ်းခဲ့တာ၊ အော် မိဘများပါစုံစွာ၊ သားမယားကိုကျွေး အလှူပေးဘို့ ရာ၊ အော် လောင်းမြတ်ရာဇာ သာဓက ပုံတင်ကာသာ၊ ရှာမှီးဥစ္စာ ကိုယ်ရေးတွက်ပါ၊ သုံးဘို့တဖို့ပါ၊ ဝေဖန်၍ပင် ထား သင့်တာ။
ထွန်းလင်းပလည်း၊ ဘဝ ဝမ်းစာ
ည...ည ဆိုလျှင်၊ ပြုံးမရွှင်ပြီ
ရှုမဝရုပ်စုံမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၆၈ ခုနှစ်၊ မေလ၊ အတွဲ ၂၁၊ အမှတ် ၂၅၂၊ နှာ ၃၁။